Marka aad heshay ku habboon ganacsigaagu u baahan yahay ilaha webka, waxaad sii wadi kartaa laan bixinta xiriirka soo socda ee faallooyinka ku soo qoray blogkooda. Waxay kaa caawinaysaa inaad kordhiso saldhigaaga goobaha lammaanaha.
Isticmaal rikoodhada RSS-ka ee Google Reader si loo ilaaliyo raadadka blogs ee suuqaaga. Abuuri faylasha kala duwan ee mawduuc kasta. Qalabaynta geeddi-socodkan, waxaad arki doontaa qaybaha ay ku yaalaan boostooyinka la cusbooneysiiyay dhawaan.
Laguma talinayo in aad dhisato fikrado faallooyin ah ee ku saabsan mawduuca dhibta dhibta oo kaliya oo qoraya faallooyin,. Waxaad noqon kartaa kan ugu horreeya ee ka faalloodaya faallooyinka hoostiisa, laakiin kaliya ka dib marka uu si guud u akhriyo oo uu ka fekero jawaabta macquulka ah iyo jawaabta macquulka ah. Haddii xiriiriyahaaga koowaad uu ku mashquulo oo uu ku dhufto meesha, falanqeeyayaasha kale waxay u badan tahay inay riixaan si ay u eegaan cidda aad tahay. Taasi waa sababta haddii aad tahay kan ugu horreeya, isbeddelkaagu wuu ka sarreeyaa haddii aad ku socoto xisbiyada ka dib markaa falanqeeyayaasha kale ee badan Source .